सरकार ! बलात्कारीलाई फासी दे, नभए हामीलाई छुट दे लिङ्‍ग काटेर बुझाउँछौं
लेखकः सरु सुनार
चैत १५, काठमाडौं ।
दिनदिनै साना–साना बच्चा घरबाट बाहिर खेल्न निस्किँदा बलात्कार भएर मारिएका छन् । घाँस–दाउरा गर्न जाँदा बलात्कार गरी आँखा निकालिएका छन् । स्कूलमा शिक्षकबाटै यौन हिंसा र बलात्कार, मिठाई लोभ देखाएर काखमा च्यापी ८ बर्षको बालिकालाई बलात्कार गरेर फालिइन्छ ।
आफ्नो नरपिचासुको चाहना पूरा गरीपछि डाइभर, खलासीलाई पालैपालो बलात्कार गर्न बुझाईन्छ । राजधानी काठमाडौँमै १२ दिनसम्म कोठामा बन्धक बनाएर सामुहिक बलात्कार गरिन्छ यहाँ । अपराधअनुसारको कारवाही हुँदैन । अपराधी समाजमा शिर ठाडो गरेर हिड्छ । बलात्कारीलाई कडा कारवाही गर्ने कानुन त छैन नै, उल्टै उसले पैसामा न्याय किन्छ ।
अब बाटोघाटो, धारा–पधेरा, स्कुल–कलेज, कोठाहरुमै बलात्कारहरुले आक्रमण गरिरहेका छन् । अब हामी कहाँ सुरक्षित छौं ? हुँदाहुँदा त अब देशमा सुरक्षा गर्ने बर्दीवाला पुलिस प्रशासनमा रहेका सुरक्षाकर्मीहरु खुलेआम सामुहिक बलात्कार उत्रिएका छन् । अब कसले सुरक्षा गर्छ ?
अतिभो तरपनि राज्य मौन किन ?
यहाँ यसरीनै अब बालिका–चेलीहरु बलात्कार हुँदै मारिँदै जाने, अनि बलत्कारी खोजी मात्र गरिरहेनकी कडा कानुन बनाउने ? यस्ता गतिविधि रोक्न सरकारसँग कुनै विकल्प छैन ? बाबिचौर सुर्खेतमा एसईई परीक्षा दिन कोठा लिएर बसेकी परिक्षार्थीमाथी प्रहरीहरुले यौनकाण्ड मचाएर मारेको सुन्दा यति पीडा र मनमा आक्रोश र घृणा जाग्छ । मेरो बसमा हुने थियो भने म अचानोमा राखेर ती प्रहरीको लिङ्ग नै काटी दिन्थे । अचानोमा राखी गर्धन छिनाइदिन्थे ।
आखिर कहिलेसम्म ?
यहाँ दिसा पिसाब आफै गर्न नसक्ने बालिकाहरु कहिलेसम्म बलात्कृत भइरहेन ? कहिलेसम्म बलात्कारीको हातबाट ज्यान गुमाउने ? अब त आँखा खोली देउ न सरकार । नेपाली नारी–बालिका असुरक्षित छन् । कहाँ गएर सुरक्षीत हुने ?
यहाँ ८ बर्षको बालिकाको गुप्ताङ्गमा १० ओटा टाँका लगाउनु पर्ने, गुप्ताङ्गमा काठ घोच्नेको बलात्कारीको लिङ्ग काट्न किन नमिल्ने ? बलात्कार गरेर चेलीको हत्या गरी झाडीमा हाल्ने बलात्कारीको टाउको छिनाल्न किन नमिल्ने ? अब बलात्कार गरि मार्नेलाई सिँधै फासी दिनुपर्छ । बलात्कार गरी भाग्नेलाई त्यसको लिङ्ग अचानोमा राखेर टुक्राटुक्रा पार्नुपर्छ । यो तिमि सक्दैनौं भने हामीलाई छुट देउ गणतान्त्रिक सरकार । हामी छिनाल्छौं बलात्कारिको लिङ्ग ।
सरकार, हामी भन्न बाध्य छौं, कि बलात्कारीलाई फासीमा झुण्डाई देउ, कि हामीलाई छुट देउ । लिङ्ग काटेर हामी सरकारमा बुझाउँछौं । यो कुनै आक्रोश होइन, न त कुनै धम्की । त्यो समय नआउला भन्न सकिँदैन । दिनदिनै बढिरहेका बलात्कारका घटनाबारे सरकार कडा कदम नचालेपछि सम्पूर्ण महिलाहरुले सामुहिक रुप मै बलात्कारीलाई जिउँदै जलाउन बाध्य हुनेछन् । अब त्यो दिन धेरै टाढा छैन ।
प्रकाशित मिति : २०७४ चैत्र १५ गते बिहिवार
महामारीमा माननीय हराएकाे सुचना !
टुहुरा सल्यानी !
प्रकाश ज्वालाकाे अपिल पत्र : ‘पार्टीको निर्णयअनुसार बनेको सरकारका पक्षमा मतदान गरेका हौं’
कहिले पाउछन् पीडितले न्याय ?
नेतृत्व तहमा महिलाको अवस्था हेर्ने हो भने शुन्यप्रायको अवस्था छ